YoQeqesho loPhuhliso Masters Magic
I-New Mental Coaching Show ngeWaler Rolfo
Iholwa ngu-Alessandro Marrazzo
Siphila kwisiqhwithi esipheleleyo: kulindeleke ukuba utshintsho esiza kuhlala kulo apha ukuya kwi-2030 luya kuba lukhulu kwaye lubonakale ngakumbi kunabo bafumana ukuhlaziywa kwemveliso yokuqala. I-80% yento esiyifunayo namhlanje iya kudala ngonyaka kunye nesiqingatha.
Kule meko uWalter Rolfo usikhokela ngokuthi "Sitshintshe amandla", ngohambo oluthile nolumzekelo kwixesha elizayo kunye noshintsho!
Ukutshintsha ngamandla, njengoko kuya kuba namandla.
Ukutshintsha kunika amandla.
Ukutshintsha ngamandla omlingo okwenza ikusasa libe yindawo enqabileyo yokuyithatha.
Kwimizuzu ye-100 yoQeqesho lokufundisa, siya kufunda ukutshintsha utshintsho, njengolu thuba olungenako ukulahlwa. ... ukufumanisa ukuba siyimfama ngaphakathi kwegolide.
CNH - Utshintsho nguMandla
Ngena ukungena kwiGalari
I-Coaching Coaching iboniswe nguWaler Rolfo
Yintoni eyenza "ubugcisa bokuqonda into engenakwenzekayo", ngumphefumlo walo wobugcisa, obalaseleyo, okukuvumela ukuba udlulisele izinto ezilukhuni kunabo bonke, kubangele ukuba banomdla kubo bonke abaphulaphuli.
Iqela leMhlaba leMfundo
Sebenzisa le fom ecaleni kwimibuzo. Sizakuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza.
Cofa iqhosha elingezantsi ukuze ubhalise kwi-newsletter yethu kwaye uhlale uhlaziywe kuwo onke amiselweyo.
LOOP MEDIA NETWORK srl | Nge-Rochemolles 6 | 10146 Turin | Inombolo ye-VAT 10884090019
ikhaya - Abezonxibelelwano lwee - Sitemap - Ukuba bucala